Beauty - miyey ku jirta indhaha dabeecadda? Waqti si aad u eegto
Gacalisku wuxuu ku yaallaa qashinka, wuxuuna fiiriyaa jiiraanka, kaasoo si aan kala sooc lahayn cawska qallalan. Geedka gaduudku wuxuu horay u soo jiidanayaa ganaax iyo xayawaanka bilawga ah. Waxaad arki kartaa lugaheeda muruqyada oo dhulka ku riixaya xoog xoog leh. Waxaan ka hadleynaa quruxda.
Waa maxay quruxda
Libaaxii waa xayawaan qurxoon, Laakiin quruxdu sidoo kale waa ubax midab leh, sidaas oo ah jilicsanaan iyo muddo gaaban ee jiritaanka.
Lamaane jacaylka qorrax dhaca - qurux, sax?
Si kastaba ha ahaatee, waxaan ku raaxeysan karnaa carafkeeda iyo ubaxyo midab leh. Labada arrimoodba wax yar ma wadaagaan, walina waxaannu ereyga "quruxda" la wadaagnaa labadaba.
Waa maxay sababta? Maxaynu ugu yeernaa labada bahalood ee khatarta ah iyo kuwa quruxda leh iyo quruxda quruxda badan ee quruxda badan?
Beauty waa mid aan la taaban karin
Beauty waa fikrad aan la taaban karin oo been ah ee isha ku haya dabeecadda. Sidaa daraadeed, waxaan dareemaynaa inay aad u kala duwan yihiin sida quruxsan. Quruxda waa dareen ah in uu keeno dareenka aragga iyo indhaha.
Mabda'a, quruxda indhaha ee dabeecadda, laakiin sidoo kale xisaabsan habka kale. Dareenkan, qof kastaa wuxuu leeyahay qurux badan shakhsi ahaantiisa. Mid ka mid ah ayaa sidoo kale ka hadlaya quruxda gudaha.
Tani waxay noqon kartaa dhoola-caddeyn, aragti raaxo leh ama ficil gaar ah. Ama waxyaalahan oo dhan hal mar. Qof walba waa qurux. Oo qof kastana doonistiisu waa ka fiican tahay inuu qofku helo.
No qurux aan qadarin
Si loo soo saaro quruxda shakhsi ahaaneed iyo mid aad u dhow, dumar kasta iyo qof kasta waa inuu marka hore aqoonsado oo uu qadariyaa iyaga. Haddii qofku isu muujiyo inuu noqdo mid qurux badan, wuxuu dareemaa dareen badan dad kale.
Qofku wuxuu u egyahay mid soo jiidasho leh, qurux badan oo qarsoodi ah. Waa jaaniskan gaarka ah ee qofka ku soo noqda qof qurux badan. Waxaan kufirnaa jacaylka aadanaha.
Waxaan si fiican ula xiriirnaa qof leh ciriiri caan ah. Waannu ku dhufannaa qof qalaad ah oo wadada jidka ah, maxaa yeelay wuxuu naga dhigayaa inaan diirranahay.
Beauty waa qof kasta
Qof walba waa qurux. Xayawaankuna waa quruxsan yahay. Sida uu u gaar ah, sawir kasta iyo xaalad kasta waxay leedahay qurux iyo shaqsi qurux badan.
Aqoonsiga, muujinta iyo xitaa ku nool yihiin waa fanka. Farshaxanka oo kaliya waxaa laga baran karaa jilicsanaanta iyo jilicsanaanta.
Ahaanshaha quruxda macneheedu waa is jecel. Adiga oo qiimeeya naftaada iyo asxaabtaada bani-aadamku waxay bixiyaan adeegyo iyo madadaalo qurux badan.
Qaxwaha - Sheekada cabitaanka kulul ee caanka ah
Xaashiyaha jimicsiga Jinsi-jimicsi - Naadiga Man